नेपाल भर्सेस कतार, पहिलो बलमै सन्दीपले लिए विकेट (LIVE) – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाल भर्सेस कतार, पहिलो बलमै सन्दीपले लिए विकेट (LIVE)
२०७६, ७ श्रावण मंगलवार
काठमाडौं, साउन ७ । सिंगापुरमा जारी आइसीसी टी–२० विश्वकप एसिया फाइनल छनोट अन्तर्गत नेपालले दिएको १२३ रनको लक्ष्य पछ्याएको कतारले दोस्रो ओभरको पहिलो बलमै विकेट गुमाएको छ । कतारले पहिलो विकेटको रुपमा फैसल जाभिदलाई १ रनमा गुमाएको हो । उनलाई सन्दीप लामिछानले आफ्नो पहिलो ओभरको पहिलो बलमै विकेट लिन सफल भएका हुन् ।
यसअघि सिंगापुरको इन्डियन एशोसिएट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १२२ रन बनायो । नेपालका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३४, कप्तान पारस खड्काले २८, ज्ञानेन्द्र मल्लले २३, सोमपाल कामीले ११, सन्दीप लामिछानेले ९, शरद भेषावकरले ७, करण केसीले ४ रन बनाए ।
बलिङमा कतारका इकबाल हुसैनले ३, तमूर सज्जाद, लनउमान सनवारले २–२ र इनाम उल हकले एक विकेट लिए । छनोट प्रतियोगितामा नेपालसहित आयोजक सिंगापुर, कुवेत, मलेसिया र कतार गरी पाँच राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ । नेपालले साउन ८ गते मलेसियासँग दोस्रो, साउन ११ गते कुवेतसँग तेस्रो र साउन १२ गते आयोजक सिंगापुरसँग चौथो खेल खेल्नेछ।
उक्त प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा आउने एउटा टोलीले टीट्वेन्टी विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने अवसर पाउनेछ । विश्वस्तरीय छनोट प्रतियोगिता आगामी अक्टोबरमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा आयोजना हुनेछ । १४ टोलीको सहभागिता रहने विश्वस्तरीय छनोट प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा आउने ६ टोलीले भने सन् २०२० मा अस्ट्रेलियामा आयोजना हुने टीट्वेन्टी विश्वकप खेल्ने अवसर पाउनेछन् ।
स्पेन, इटाली र फ्रान्समा अझैं रोकिएन कोरोना, कहाँ कतिको मृत्यु ? (सूचीसहित)
कुवेतमा एकजना नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण
कोरोना संक्रमित बाग्लुङकी किशोरीको दोस्रो रिपोर्ट नगेटिभ आउनेमा चिकित्सक आशावादी
बिहिवार कस्तो वित्दैछ तपाईंको दिन ? पढ्नुस् राशिफल
बढ्दै कोरोनाः अमेरिकामा एकैदिन १०४९ को मृत्यु, साढे २६ हजार संक्रमित (सूचीसहित)
स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादः किन रद्द भयो ठेक्का ?
भयावह बन्दै कोरोनाः मृतक संख्या ४७ हजार नाघ्यो, साढे ९ लाख संक्रमित (सूचीसहित)